-NRNA Official Seal
कृष्ण के सी, अमेरिका, १२/१५/२०
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्यव परिषद (एनआरएनए आइसीसी) ले आगामी जनवरीको २३-२४ मा गर्न लागेको बिशेष महाधिवेशन संबन्धि विवादले बजार तताएको छ। संघको रुपान्तरणका लागि भनेर धेरै फोकस गरिएको यस बिषयका पक्ष र विपक्षमा सहमति र असहमतिले संघको नेतृत्वमा समेत ध्रुवीकरणले ल्याएको छ।
हुन त गैरआवासीय नेपाली संघलाइ सहि रुपमा लैजाने जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वको हो। हामी प्रतिनिधिहरुले त्यसैका लागि कुमार पन्तको अध्यक्षतामा निर्वाचित टिम बनाएका हौँ। सो निर्वाचित टोलीको अगाडि म समौसा-सिम्खडा, पकौडा र पंचाङ्गे जति पनि होइन होला। यो विषम परिस्थितिमा म एउटा सानो व्यक्तिले सुझाव दिने हैसियत गर्दिन होला, गरे पनि मेरो कुरा सुनिंदैनहोला। खुरापातीको चोरी पुराण सजिलै बिक्छ तर हाम्रो विचार तुहिन्छ।
मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने पनि विचार, लेखन चुनावका बखत तिनै उम्मेदवारको नजरमा एक नम्बर मानिन्छन। तर निर्वाचनपछि अन्तिम नम्बरमा पर्छन या बोरामा थन्किन्छन। झोलाको चैतेले विराजमा हुने मौका पाउँछ अनि हामी बिचारीहरु भैलो गाउनेमा दरिन्छौँ। यो कुरा २०१५ देखि अहिले सम्म निरन्तर भएको छ। अझै पनि यस्तै हुन्छ मेरो कुरा यो पटक पनि बिक्दैन होला। तर पनि आफ्नो कुरा राखेर नै छोड्ने आफ्नो जिद्दीबानी फेरी पनि झस्केर र ठस्केर होइन मस्केर पस्केको छु।
यसैबीच म आफूले अग्रज, नेतृत्वबर्ग, गुनासो गर्ने पक्षसँग लिएको जानकारी, बिषय र बिधानको अध्ययन र सूचनाका आधारमा केहि विकल्पमा सुझावहरु राखेको छु। यसबाट मेरो कुनै स्वार्थ पुरा हुँदैन र कसैलाई खराव पनि गर्दैन यो त केवल समाधानको एउटा विकल्प दिएको मात्र हो। बिशेष महाधिवेशन सफल रुपमा सम्पन्न हुने र संघले पनि रुपान्तरणमा एक पाइला अगाडि जाने विश्वासका साथ यहाँ केहि कुरा प्रस्तुत गर्ने अनुमति मागे।
१. बिशेष महाधिवेशनको तिथि-मिति जनवरी २३-२४, २०२० लाइ संघको कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) ले फाइनल गर्ने
२. बिशेष महाधिवेशनमा पेश गरिने एजेण्डाहरु, दस्तावेजहरु आइइएसले तुरुन्त फाइनल गरेर अन्तराष्ट्रिय परिषदको बैठकमा अन्तिम रुप दिनको लागि पेश गर्ने
३. परिषदमा प्रस्तुतपछि एजेण्डा, दस्तावेजहरु अध्ययनको लागि वेबसाइटमा पब्लिक गर्ने। अनि गत महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधिहरुलाई एजेण्डा, दस्तावेजप्रति या सोको साइट लिंक इमेल गर्ने
४. बिशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधि पनि गत महाधिवेशनकै प्रतिनिधि हुने सर्वब्यापि मान्यता हुनाले त्यसमा कोहि व्यक्ति NRN को हैसियत नरहेका या सधैंको लागि नेपाल फर्किएकाहरु हटाउन पाइने तर नयाँ थप नगर्ने
५. यो बिचमा बनेका नयाँ एनसीसी, एडहक कमिटी र सदस्य भएका तर एनसीसी नबनेका देशका सबैलाइ प्रतिनिधि छनोट बिधि अनुसार नै पर्यवेक्षक प्रतिनिधि छानेर सहभागी हुन दिने तर उनीहरुको भोटिङ्ग राइट नहुने
६. बिशेष महाधिवेशन भर्चुअलमा हुने हुनाले सम्पूर्ण दस्तावेज र एजेण्डाहरुमा प्रतिनिधिहरुले Yes or No गरि अनलाइन भोट गर्न पाउने ब्यबस्था गर्ने
७. सो भोटिङ्गको नतिजा लाइभ गर्ने, रेकर्ड दुरुस्त पब्लिक गर्ने जसले गर्दा कसैलाई पनि संघको भोटिङ्गप्रति आसंका पैदा नहोस
८. आइइएस बैठकमा पूर्व अध्यक्षहरुलाइ बिशेष आमन्त्रण गरेर या अध्यक्ष आफैंले एकल या संयुक्त रुपमा संघका एजेण्डा, दस्तावेजबारे जानकारी गराएर राय समेत लिने
९. बिशेष महाधिवेशनबाट जे पास हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन प्रकृयामा अगाडी बढाउने
१०. कतिपय राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा सदस्यता वितरण, नवीकरण र निर्वाचनको मिति नजिक भएको कारण त्यसलाई सहज गर्न तत्काल कुनै उपयुक्त निर्णय गर्ने
११. आवश्यक राय, सुझाव र सल्लाहलाइ सहि भएको अवस्थामा परिमार्जन गर्दै थप गर्ने
यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, कृष्णार्पण !